Mendrika ve ny manao clip amin'ny aero? - Fitsapana
Tena > Fitsapana > Bara fitsapana ora - ny torolàlana farany
Bara fitsapana ora - ny torolàlana farany
Mendrika ve ny manao clip amin'ny aero?
Lohahevitra: RE: AreAero Bars WorthIzany? ENY,aerobarsNYmanan-danjafa tsy izanymanan-danjaizany raha tsy hoe mifanaraka tsara! Ny fampidirana azy ireo fotsiny sy ny fandehanana dia mety hahatonga anao haingam-pandeha, fa ny fananana ny vatana tsy ho eo amin'ny lafiny ara-jeometrika dia hampijaly anao kokoa amin'ny fotoana maharitra.
(Racing Music) - Ny fitsapana amin'ny fotoana dia fomba tsara hanandramana ny tananao amin'ny hazakazaka. Mora vidy izy ireo, be ny hetsika eo an-toerana, tsy maharitra izy ireo, ary raha vaovao amin'ny bisikileta ianao dia tsy misy. Tsy ny tsindry mampatahotra ny mitaingina peloton.
inona no atao hoe menopause yahoo
Fa rehefa miresaka amin'ny olona momba ny fotoana fitsapana aho dia matetika izy ireo no manahy momba ny fitaovana. Hoy izy ireo: 'Manana bisikileta andrana ve aho?' dia, tsy mila bisikileta fitsapana fotoana ianao mba hanaovana andrana. Ny tiako holazaina dia eny, raha te hifaninana ianao dia mety mila bisikileta fanandramana fotoana mahafinaritra sy ireo fitaovana rehetra.
Fa raha te hijery fotsiny ianao mitaingina fitsapana ara-potoana, na refesina ny fanatsaranao isan-kerinandro rehefa mihalasa ianao. Bisikileta amin'ny hazakazaka ihany no ilainao. (mozika frenetic) Ankehitriny, ampahany amin'ny kit ny fampiasam-bola tena tsara ho an'ny fotoana fitsapana tsindraindray dia andiana bara aero-clip aero toa ity.
Izy ireo dia mety ho an'ny vao manomboka amin'ny fotoam-pitsarana na triathlon. Ankehitriny satria tiako ny fotoam-pitsapana ary te handeha haingana araka izay tratra ny bisikiletako dia nieritreritra aho fa hanao fanandramana kely hahitako hoe haingana be na tsia ireo bara fanaovana clip aero ireo fa tsy mitaingina ny rano mitete fotsiny. ary metatra elektrika.
Mametraha andrana fitsapana amin'ny fotoam-pitsapana, roa kilometatra ny halavany, mihodina kely amin'ny alàlan'i Corvara sy Alta Badia. Mety hanontany ianao hoe: 'Fa maninona no avo'? Eny, ny antony nisafidianana dragis miakatra mba hitazomana tsy tapaka mandritra ny lalan'ny fitsapana.
Intelo nitaingenako azy isaky ny fananganana. Ny antony hanaovana fitsapana telo isaky ny fananganana dia satria, amin'ny salan'isa, dia manao fitsapana marobe amin'ny valiny azo antoka kokoa izahay, izay mazava ho azy fa tsy ara-dalàna, afaka miala isika ary mamerina. Ka rehefa hiresaka ny takelaka aero amin'ny bisikileta dia tiako ny hitovy ny lanjan'ilay bisikileta iray manontolo ka ny hany zavatra hovainay dia ny toerana eo am-pelatanana.
Ka nolanjaiko ireo bara aero. Ary 280 grama izy ireo ary ho an'ny fihazakazahana tsy misy bara dia manana tavoahangy misy rano 280 mililitera aho ary ho an'ny fihazakazahana miaraka amin'ireo bara aero dia manana tavoahangy poakaty ny kitapo aero-clip aero aho. Hanomboka amin'ny 30 kilometatra isan'ora aho. (mozika mampihetsi-po) (miaina mafy) Marina, vao manomboka manomboka mihazakazaka roa miaraka amin'ny familiana aero aho.
Hanomboka hikodiadia amin'ny 30 kilometatra isan'ora aho, andao handeha. (Mozika mavitrika) Marina
Mihazakazaha telo, miaraka amin'ireo bara aero: Andao handeha. (Hira hentitra) Marina, taloha kelin'ny nanombohan'ny fihazakazahana voalohany tsy nisy bara aero. I. 'Handeha mitaingin-tsoavaly aho.
Ka handeha aho izao ary handeha hanomboka amin'ny 30 kilometatra isan'ora. (mozika matanjaka) Marina, mihazakazaha roa, eo am-pito. (mozika matanjaka) Marina, mihazakazaka laharana fahatelo, eo amin'ny latsaka: Andao handeha. (mozika mikapoka) Misy ny valiny, ary gaga aho milaza fa misy fahasamihafana lehibe tokoa.
Raha ny marina dia tsy nampoizina fa hisy fahasamihafana lehibe mihoatra ny roa kilometatra. Saingy raha tsy nisy ny bar aero dia nanana salan'isa 1,3 watts bebe kokoa aho.
Ary izaho dia salan'isa 15 segondra miadana kokoa amin'ny kilometatra roa. Raha ampitomboinao amin'ny 20 ilay izy mba hanaovana andrana adiny 25 kilometatra dia 40 kilometatra izany, izay mahatratra dimy minitra eo ho eo. Be izany.
Fahasamihafana lehibe tokoa izany. (Command music) Ny antony mahatonga ahy mahagaga ahy amin'ity valiny ity dia ny fahafantarako fa ny zava-dehibe indrindra ahazoana tombony aero sy fatiantoka aero dia ny faritra eo anoloana. Midika izany fa raha te hahazo haingana ianao, dia mila midina ambany kokoa.
Amin'ity bisikileta aero ity dia tsy afaka miditra lalindalina kokoa aho eo alohan'izay satria kely eo amin'ny fihin-tànana aho dia tsy midina ambany. Raha ny marina, raha misy, somary lava aho. Ary noheveriko fa midika izany fa miadana kokoa aho amin'ireo bara aero-clip.
Ka ahoana no fomba haingana kokoa? Heveriko fa mety ho inona ny hoe ny kihoko dia niara-akaiky kokoa tamin'ireo bara aero. Tery ny sandriko. Raha eo am-potony dia eto ny sandriko ary malalaka kokoa aho izay niavian'ny tombom-barotra.
Na izany na tsy izany, mahavariana. Mampiseho izany fa amin'ny kit tsotra fotsiny, toy ny bara aero-clip, dia afaka manisy fiovana lehibe tokoa ianao. Tombontsoa lehibe iray hafa an'ny bar aero izay mbola tsy notsapainay teto dia ny fahitan'ny olona matetika fa afaka miala sasatra tsara kokoa amin'ny bar aero izy ireo noho ny rano mitete.
Satria mila hozatra vitsy kokoa ianao ao an-damosinao, soroka ary sandry mba hitazomana ny tenanao. Ary rehefa tsy dia mampiasa hozatra amin'ny vatanao ambony ianao dia midika izany fa manana tanjaka bebe kokoa ianao hanosehana mafy ny tongotrao. (mozika matoky) Manantena aho fa ity lahatsoratra ity dia hamporisika ny filanao andrana amin'ny fotoana fitsapana ary hampiseho fa tena tsy tokony ho sakana ny fitaovana raha toa ianao ka te hanandrana dia mampiseho fa ny fanitsiana kely dia kely tokoa dia afaka manatsara ny fotoanao.
Raha te hijery lahatsoratra iray hafa ianao momba ny antony tsy maninona ny habe amin'ny fitsapana amin'ny fotoana fisaka, farafaharatsiny tsindrio eto ambany. Na azonao atao ny manamarina ny fanontana geek an'ity lahatsoratra ity izay hijerenantsika ny fototr'ireo aerodynamika itty amin'ny fipihana eto ambany.
Afaka mametraka bara aero amin'ny bisikileta ve aho?
Ahoana ny fametrahana azyaero fisotroanaamin'nybisikileta?BisikiletymatetikaAzatsy miarakaaero fisotroana, clip manokana toy izany amin'nyaero bara afakaampiana. Ny ankamaroanybisikiletakitapom-batsyafakahandraisanaaero fisotroana, fa zava-dehibe ny manamarina fa ny anaobisikiletamifanentana ny soavaly.21 2019.
Eny, raha vaovao amin'ny triathlon ianao, na tena tanana taloha, dia mety mitaingina bisikileta toy ny iray amin'ireny matetika eny an-dalana ireny, saingy liana amin'ny hevitra momba ny fitsapana triathlon na fitsapana amin'ny fotoana ve ianao? bisikileta. Fa ny fieritreretana ny hanaparitaka izany vola rehetra izany amin'ny bisikileta fanampiny mba handehanana haingana kokoa dia toa kely loatra, sa tsy izany? Aza matahotra anefa, satria amin'ny ampahany kely amin'ny vidiny sy tombony iray taonina amin'ny iray amin'ireo bisikileta triathlon na TT ireo, miaraka amina setrin'ireo kitapom-baravarankely aero ireo dia azonao atao koa ny mahazo aina sy mivoaka amin'ny bisikiletanao. Androany aho hiresaka momba ny fomba hametahana andian'ireto clip ireto-amin'ny alàlan'ny aero eo amin'ny bisikiletanao mba hanampiana anao handeha haingana kokoa amin'ny arabe. (mozika manaitaitra) Ka ny zavatra voalohany aloha dia nanapa-kevitra ny hametraka ireto takelaka fametahana horonantsary ireto eo amin'ny kitaponao ianao, saingy mila jerena raha mifanaraka amin'ny clip-ons ireo takelaka ireo, ka zahao ny tananao manokana ary jereo raha manana efitrano amin'ny lafiny roa amin'ny tsorakazo ianao, mila elanelam-potoana roa eo ho eo ny sakany, na roa ka hatramin'ny telo santimetatra amin'ny lafiny roa amin'ny tsorakazo, noho izany dia afaka mipetaka eo ambonin'ity taho ity ny kitapom-bokotra aero, toa anao Eto no ahitanao an'ity tery kokoa ny tohana raha mihoatra ny roa ka hatramin'ny telo santimetatra ianao.
Ka ny sisa hataonao dia ny manamarina sy maka antoka fa misy toerana ho an'ireny kitapom-bokotra ireny ary zahao ireo anjaranao satria matetika izy ireo dia manana toro lalana mora ampiasaina, toy ireo lalantsara fanoloana izay asehoko anao eto fa tsy azo antoka intsony izy io hametahana ny clip-ons anao aorian'ity teboka ity. Ny bisikileta dia misy tantanana karbona, mitandrema fotsiny fa ny karbaona dia mirona tsy ho clamping ary matetika ireo karazan-tànana ireo dia mila hamafisina mba hiara-hiasa amin'ny Aero Handlebars, noho izany dia tsara kokoa ny manontany amin'ny mpamokatra momba ny baoritra r amin'ny voalohany, na fotsiny mankanesa any amin'ny fivarotana bisikiletanao eo an-toerana ary manontania hoe: 'Azoko apetraka eo amin'ny bara fitondra-by ve ity takela-by ity?' (mozika malefaka) Ka raha vao hitantsika izay takian'ny bisikileta sy ny kitapom-bolantsika manokana, fotoana tokony hametahana ny bara aero antsika eo amin'ny kitapom-batana, ankehitriny dia nanapa-kevitra ny hametraka fanitarana roa sosona aho, mifanohitra amin'ny safidy iray hafa satria mihevitra aho fa manolotra fanitsiana sy fampiononana bebe kokoa, fanatrarana sns, fa handeha hiresaka kely kokoa aho ao aoriana ao amin'ny lahatsoratra, ary araka ny ahitanareo fa efa nanomboka nanao iray aho ny fanitarana mba hikitika ny tohanan'ny 'satria somary fiddly ny fizotrany, ary mifandraika amin'izany fiasa izany dia mila votsorantsika aloha ny clamp avy ao ambadiky ny fanitarana, raiso eo ambanin'ireo fitoeran-tànana, apetraho ny sisa rehetra eo amboniny ary avy eo ny visy dia manenjana ny tampony fa tsy tery loatra satria te-hanana fihetsiketsehana ao anaty clip-on ianao eo am-pelatanana mba hanananao maneuverability na iza na iza no tadiavinao misafidy an'ity toerana ity ianao . Tsara ny manamarika fa mendrika ny mametraka sosona vitsivitsy amin'ny kasety elektrika eo am-pelatananao rehefa mifehy vy amin'ny vy isika amin'ny ho avy, raha te-hanaisotra ireo lalamparan-tsarimihetsika indray ianao, dia tsy mila tadikely. miala ny fitoeran-tànanao. (mozika malefaka) Ka, araka ny hitanao, dia nampidiriko ny fanitarana faharoa ho an'ny kofehy, fa te-hiditra amin'ny fanitsiana izay noresahiko taloha fotsiny satria ireo fanitarana ireo dia manana fanitsiana betsaka ary izany dia ilaina amin'ny iray Screw izay mipetraka eo ambanin'ny sandry sandry eto ary rehefa manokatra aho fa tampoka tampoka aho ary manana halava lava fanampiny mandroso sy miverina izay manome an'ireo bara clip-spektiva fanitsiana fanampiny fotsiny, ary farany mariho fa tena manana toro lalana tena mora azo atao ianao eto amin'ny extension aero.
Midika fotsiny izany fa mety ho marim-pototra tsara ianao amin'ny y, eny fa hatramin'ny milimetatra misy antsika aza. (Mozika malefaka) (kodiarana bisikileta purr) Raha vantany vao nametraka ny toerana ankapobeny izahay, ny dingana manaraka dia ny mahazo aina ary io toerana io miaraka amin'ireo bara fisolokiana dia misafidy ny hanangana ilay mpanazatra anaty trano toy ny nataoko teto. Raha tadidinao dia tsy nohamafisiko tanteraka ny visy tamin'ireny clip-on ireny, ary misy antony, rehefa eo amin'ny bisikiletako aho dia azoko atao ny manondrotra azy ireo tsimoramora na manosika azy ireo hidina akaiky hanandrana hahita ny toerana mety ao izay hipetraka.
Raha vantany vao afa-po amin'izany aho dia afaka manamafy azy. Ho fitsipiky ny ankiben-tanana ho an'ity fametrahana ity dia nilazana foana aho ny manandrana ary avelao ny sandriko ambony hanaraka ny tongotry ny bisikileta ary hitovy amin'ny tany ny soroko. Ary amin'ny lafiny fametrahana io toerana io dia tena tsara raha manana namana afaka manampy anao haka sary ianao na raha ny tena izy dia lahatsoratra kely hahafahanao mijery azy sy mametraka azy tsara. (Mozika malefaka) Ankehitriny, indraindray ny armrests na pad padre araka ny iantsoana azy ireo, dia azo afindra be koa amin'ireo bara fantsona ireo, indraindray mety ho hitanao fa tratra eo aminy ny lohalinao mandritra ny bisikiletanao ahafahanao mandroso azy ireo, na tokoa, raha be loatra ny elanelany dia azo sintomina mihemotra koa izy ireo.
Ny sisa ataonao dia ny manaisotra ny fatotra Velcro ary avy eo dia miharihary ireo visy ao ambany, ankehitriny dia tiako manokana ny miala azy ireo rehefa manamboatra bara fanaovana clip aho. Izy ireo dia ao amin'ilay antsoiko hoe toerana tsy miandany izay matetika mipetraka eo afovoan'ny safidy ny bolt araka ny hitanao eto. Matetika koa misy habe haben'ny habe ho an'ny bara fanaovana clip izay eo ambaniny eto ambany amin'ny fanitarana, ary tiako hipetraka eo afovoany ihany koa izy ireo mba hiandany amin'ny atsy na aroa.
Mazava ho azy, raha mahatsapa ianao fa te-hivelatra bebe kokoa dia azonao atao ny manosika ny pads eo aloha, ary toy izany koa raha mahatsapa ianao fa mihinjitra loatra dia esory ihany koa izy ireo. (mozika malefaka) Ka ny teboka iray ampidirantsika ity clip-on exe ity ho an'ny fihenjanana dia manandrana ho aerodynamika kokoa ary ny fisainana ankapobeny dia ny ambany kokoa ny tsara kokoa rehefa manandrana hahatratra an'io isika, saingy mazava ho azy fa ny antsika dia Positions kely daholo samy hafa ary mety tsy te hanana ny toerana farany ambany indrindra isika miaraka amin'ireny clip-ons ireny ka misy ny fahafahan'ny maro manova ny haavon'ny sandry am-pelatananao amin'ny fampidirana an'io karazana fisondrotana io amin'izao fotoana izao dia ambany loatra ity sandry sandry ity arak'izay azo atao eo amin'ny tantanana fa raha ampidiriko ity sakana ity izay 30 mils izay hipetraka eo fotsiny, atsangano ny sandry ary hampiakatra azy amin'ny haavo antonony izany, ary mazava ho azy fa afaka manampy haavo ambony kokoa aho hampitomboana izany lavitra. (mozika malefaka) Ka eo amin'ny toerana tsara aho izao ary nifanaraka tamin'ireto tànana clip-on vaovao ireto amin'ny bisikileta.
Misy lafin-javatra vitsivitsy ihany tokony hodinihina mba hanatsarana ny toerana ankapobeny. Ny voalohany amin'ireo dia ny lasely satria rehefa ao anaty bar aero isika ary midina amin'ny bisikileta amin'io toerana io dia miova ny zoro valahantsika raha oharina amin'ny fononteny ambany, mba hahafahantsika mandroso kely ilay lasely hanohitra izany, ary izany dia manampy amin'ny toerana misy antsika amin'ny ankapobeny rehefa tsy voafehin'ny aero isika, ary mendrika hotononina izany, ary tsapako fa isaky ny manana an'io toerana io aho dia mazàna mandroso ihany eo amin'ny lasely. Ny teboka iray hafa tiako horesahina dia ny aerodynamika izay ezahantsika hatsaraina amin'ny bisikileta ary amin'ny ankapobeny ny ambany dia tsara kokoa.
Ka raha azontsika atao ny mitondra midina kely ny kitantsika, dia afaka manampy betsaka ny toerana misy antsika izany, ka mendrika ny hijerena ny haavon'ny fotonao ary hijerena raha misy spacer ao ambanin'ilay tsorakazo, ankehitriny fantatro fa io dia endrika hafa mitady aerodynamika, Ka tsy maintsy nesoriko fotsiny ireto spacer ireto mba hilatsaka ny fotony, fa amin'ny bisikileta matetika no azonao atao? esory ny spacer ary apetaho eo ambonin'ilay tahony izy ireo ary milalaova miaraka amin'ny toerana misy anao hahitanao izay tsapany rehefa eny am-pandehanana ianao, azoko antoka fa aerodynamika kokoa noho ny taloha aho ary ny zavatra tsara momba azy ireo dia izy ireo Tena nanova ity bisikiletanao ity ho zavatra mitovitovy amin'ny mitovy amin'ny TT, ary araka ny nolazaiko teo am-piandohana, ho an'ny ampahany amin'ny vidin'ny bisikileta vaovao - raha nanapa-kevitra ny hanova ny bisikiletanao ianao amin'io faritra io koa, azafady soraty amin'ireto fanehoan-kevitra etsy ambany ireto, tiako ny maheno izany, raha nankafy ity lahatsoratra ity ianao, azafady tsindrio ny bokotra ankihiben-tanana. Mitadiava an'izao tontolo izao eo amin'ny efijery hahitanao ireo lahatsoratra hafa rehetra ao amin'ny fantsonay, ary raha te hahita lahatsoratra hafa momba ny fanatanterahana zavatra ianao amin'ny ampahany kely amin'ny vola lanin'i Mark tamin'ny kodiarana kapila an-trano DIY dia afaka mahita ianao Ery.
Inona ireo bara aero bisikileta?
Inona marina izanyBara Aero? Amin'ny teny tsotra,aero fisotroanadia ny fanitarana tariby miatrika mandroso miaraka amina sisin-tànam-baravarankely, ahafahan'ny mpitaingina miditra amin'ny toerana aerodynamika kokoa.
Mametraka kasety amin'ny bara aero ve ianao?
Fa tsy fonosina amin'ny paddedkasety bara, toy ny mahazatrabara,aerolalanatrano fisotroanadia natao hampiasaina ambony tampoka. Na dia malama ao anaty rivotra aza ny tampon-tampony, dia mety malama ihany koa ny tanana. Mpanafika mpomba fotsinyscotchizy ireo ara-dalàna.
Fa maninona aho, izaho James avy any Supacazand anio dia hasehoko anao ny fomba matihanina hamonosina ny kitanao. Ny ilainao dia ny lakilen'ny Allen milimetatra telo hanenjana ny plug-nao, ny hety hanapahana ny kasetyo Penand andiana fantsom-pitaovana Supacaz vaovao ka andao hojerentsika izay ao anaty boaty manana horonan-kasety roa isika, plug-tady roa ary tapa-damba famaranana roa: Efa nesorinay ilay kasety fitanana taloha ka andao hanararaotra hijerena ny vavahadin-tsika ary ho azo antoka fa azo antoka ny tariby sy ny fantsona ary ny trano Raha misy zavatra malalaka na mikorisa dia izao no fotoana hanamboarana azy tsara amin'ny kasety elektrika.
Ka andao hanomboka fonosana dia hanomboka amin'ny farany antsasaky ny sakany avy amin'ny sisiny isika ary efa avy eto isika no zoro amin'ny lalana miakatra ny bara ka andao hanomboka. Tokony hisintona ny kasety ianao ary hihazona ny fihenjanana. Ny kasety ataonay dia natao ho azo zahana ka azo ovaina amin'izay tianao ahatongavan'ilay kasety ny fihodinam-bokotra mihodina vitsivitsy ary mihazona iray segondra mba hahafahantsika mametraka ny plugs izay omenay ireto plug-volo mahafinaritra ireto izay mora apetraka sy super azo antoka, ny antony hametrahantsika ny plug ankehitriny dia satria nisy lesoka teo am-piandohan'ny fonosana, mora kokoa ny manamboatra entana eto fa tsy tonga hatramin'ny farany ary mila mamerina ny zavatra rehetra, azonao ampiasaina izao ny teloo milimetatra hex wrench hanenjana ny plug.
Tianay ny mifanindry ilay kasety manodidina ny fito milimetatra ary eo no eo an-ilany ny fantsom-baravarana io tsipika fanapahana io. Azonao atao ny mampiasa azy io ho toy ny loharanom-pahalalana hitazonana elanelam-potoana tsy tapaka manerana ny fonosana Mila manonitra kely ianao rehefa mandeha manodidina ny zorony toy ny tariby misy ny lafiny iray manan-danja amin'ny fehikibo dia ireo sisiny manify faran'izay mifampiresaka mba hanomezana anao famaranana madio sy fisaka. Raha vantany vao manakaiky ny vatan'ny levera isika dia te hitoetra amin'ny lamina maodely valo.
Ity no fomba tsara indrindra ahazoana fandrakofana feno sy hisorohana ny fanakorontanana ireo faritra ireo, mba hanaovana izany dia mamakivaky ny tampony isika manodidina ny aoriana sy ny eo aloha ary avy eo miverina indray. Zavatra tiako asongadina momba ity faritra ity dia misy an'io sary sokitra voasokitra io miaraka amin'ny lavaka famafazana ao amin'ny vatam-paty fa tsy nisoroka ireo lavaka ireo aho mba hahafahan'ny hood manantona tsara ny vatan-kazo eo amin'ny faritra misy antsika. milalao rehefa lena ary manome anao izany fihazonana fanampiny izany rehefa tena ilainao izany. Nomariko io eto io rehefa niampita ity hevitra ity aho.
Hampiasa ny pensilihazo aho hanamarihana ny teboka fihaonan-dàlana ary avy eo manohy manarona mandra-pahatongan'ny kasety indray io teboka io ary homeko marika ihany koa io teboka io ary ankehitriny dia hamaha kely aho ary ho hitanao ireo teboka roa miorina mahitsy andalana mandroso ary manapaka an'io tsipika an-tsaina io, afaka mamarana faran'ny madio isika izao ary ampiasao ny kasety famaranana Supacaz izay niditra tao anaty boaty ihany tao amin'ny fantsom-by dia afaka miverina ireo hood ary manantena isika rehetra fa nanampy betsaka noho izany mijery lahatsoratra misimisy kokoa jereo ao amin'ny fahitalavitra Supacaz ary misoratra anarana hahita anao any aoriana.
Mampidi-doza ve ny bara aero?
Aerobarsazo heverina ho tsy azo antoka kokoa noho ny antony vitsivitsy: ny ankamaroany satria ny tànanao tsy eo amin'ny frein rehefa mitaingina nyaerobars. Mila fanao sy fahaizana bebe kokoa ihany koa ny fitazonana tsipika mahitsy ao amin'nyaerobars(indrindra amin'ny rivo-doza) noho ny halaviran'ny fiarahan'ny sandrinao.12.15.2017
Mahatonga anao haingam-pandeha ve ny bara mitete?
nilatsakamanolotra tombony aerodynamika- Ny aerodynamika dia mitana andraikitra lehibe amin'ny hafainganana sy ny fampiasana angovo mandritra ny bisikileta. Nyhaingana ianaotsingerina, vao mainka mandeha ny aerodynamika.Mitete baraAvelaoianareomiondrika sy mampihena drag Ity toerana ityafakaampitomboina haingana ny hafainganana sy ny fahombiazanao.02.24.2020
Manao triathletes Pee amin'ny bisikileta ve ianao?
Fivalanana. Ny fiantombohan'ny hazakazaka dia miteraka fahavoazana ho an'ny ankamaroan'nytriathletes. Tsy misy fiheverana firy ireo hazakazaka manaraka azy ireo, ny sasanytriathleteshanala tena rehefa mitaingina nybisikileta, avy eo araho ny taratasy fiasana miaraka amin'ny famafana tavoahangy rano.
Tokony hampiasa tri bar ve aho?
Fanairana Spoiler: ENYbara telomanaova fanovana. Izy ireo no fomba haingana sy mora indrindra hanatsarana ny hafainganana amin'ny bisikileta. Na izany aza, raha ity no vanim-potoana voalohany misy anao amin'nytriathlonna ny fotoana voalohany nitondranao bisikileta nandritra ny fotoana lava,Azaaza manahymampiasa tri bar.
Mahazo aina kokoa ve ireo bara aero?
Ny antony voalohany mahatonga izanyaerobarsdia malaza amin'ny bisikileta lavitra indrindra dia matetika tsy ny tombotsoan'ny aerodynamika (izay misy dikany), fa io no fanampinyAmpionònynatolotr'izy ireo tamin'ny alàlan'ny fanesorana ny lanjan'ireo tànana fa kosa ny taolam-paty hanohanana ny lanjan'ilay vatana ambony amin'ny alàlan'ny kiho.
Fa maninona no tsy avela ny bara aero?
Aerobarsazo heverina ho tsy dia azo antoka noho ny antony vitsivitsy: ny ankamaroany satria ny tananao notsyamin'ny freins rehefa mitaingina nyaerobars. Mila fanao sy fahaizana bebe kokoa ihany koa ny fitazonana tsipika mahitsy ao amin'nyaerobars(indrindra amin'ny rivo-doza) noho ny halaviran'ny fiarahan'ny sandrinao.